Madaxweynaha Somaliland oo cafis u fidiyay Siyaasiyiinta Somaliland ee ku sugan Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa cafis u fidiyay Siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland ee ku sugan magaalada Muqdisho, kadib markii dhowaan cabasho ka keeneen go’aanadii ka soo baxay shirkii madasha Wada-tashiga qaran.
Wasiirka Warfaafinta Somaliland Cusmaan C/llaahi Saxar-diid ayaa sheegay in baaqa Madaxweynaha u fidiyay ujeedkiisa yahay mid loogu daneynayo siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho, maadaama aanay waxba u oolin Xamar sida uu yiri.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Xukuumadda Somaliland ay daad-gureyn doonto siyaasiyiinta hadii aysan imaan karin deegaanadooda sida uu hadalka u dhigay.
“Waxa alla wixii siyaasi ah ee ku sugan Muqdisho ee ka soo jeeda Somaliland cafis ayuu u fidiyay Madaxweynaha, hadii ay imaan karin oo kalifto, waxaa ka qeyb qaadan doonaan daad-gureyntooda”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Somaliland.
Cusmaan Saxar-diid oo sii hadlayay ayaa yiri “Walaalaheena Xamar jooga waxaa leenahay wax idin yaala meeshaas ma jirto, baaqa Madaxweynaha idin fidiyay ee Ciziga, karaamada halkaas kuma leedihiin ee halkan ayaad ku leedihiin, sida maanta u aragtaan ayay arrimuhu yihiin eek a tashada oo imaada”
Siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland ayaa qaadacay shirkii Madasha Wada-tashiga qaran, kadib markii saddex xubnood laga jiray 11-ka xubnood ee ay aqalka sare ku lahaayeen, isla markaana loogu daray Puntland, iyadoo markii dambe labo xubnood oo dheeri ah la siiyay.
Si kastaba ha ahaatee baaqan ka soo baxay Madaxweynaha Somaliland ayaa loo arkaa culeys siyaasadeed oo ku noqonaya dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, halka Maamulka Somaliland ay dooneyso in siyaasiyiinteeda iyo dad kale ee ka tirsan dowladda inay albaabada u furto, si ay u xoojiso madax banaanideeda.